Iilogo zeklabhu yasebusuku: Imizekelo yeyona Logos yeklabhu yasebusuku iBalaseleyo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 11/05/2022 16:00 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Umthombo: Iindaba ze-SIC
Uyilo lweGraphic lukwanxulunyaniswa neshishini lepati, enyanisweni, inxalenye enkulu yale mizi mveliso inombulelo omkhulu kumfanekiso abawuvelisayo. Kulapho umyili engena khona, owenza umsebenzi wokudala uphawu olubonisa uluntu ukuba luza kulawulwa njani.
Kule posi asizanga kuphela ukukubonisa ezinye zeeklabhu ezilungileyo kwihlabathi. Kodwa kungcono, Siza kukubonisa ezona logo zibalaseleyo zenziwe kule minyaka imbalwa idlulileyo kwamanye ala maqela ingakumbi indlela abe nefuthe ngayo kushishino.
Siqala ngoluhlu olude
1 Ezona logo zeklabhu
1.1 Molo Ibiza
1.4 Imisebenzi yokuprinta
1.5 IGreen Valley
1.6 Iklabhu ye-Epic
Ezona logo zeklabhu
Umthombo: Molo Ibiza
Hi Ibiza yenye yeeklabhu zasebusuku ezilungileyo kwihlabathi liphela. Itholakala e-Ibiza (eSpain). Masithi enye yezo ntlobo zeeklabhu eziqokelela amawaka kunye namawaka abantu ngexesha lasehlotyeni, kwaye inezidumi ezinkulu ezivela kwihlabathi lomculo we-elektroniki, njengoDavid Guetta. Ifumaneka kwindawo efanayo kunye ne-Mythical Space Ibiza esiyaziyo. Inomthamo wabantu abangama-5000, iinkcukacha eziyenza ibe liqonga elihle lokonwabela owona mculo ubalaseleyo.
Ngokubhekiselele kumfanekiso wayo, i-logo igqamile emelwe ngawo omabini amagama egama leklabhu. Ngaphandle koko, Inomoya othile we-avant-garde kwaye ngexesha elifanayo lifihla umoya othile wembali. Idityaniswe kakuhle nenye i-sans serif sans serif typeface, enika igama lesixeko esikuyo. Ngaphandle kokungathandabuzeki, umfanekiso obonisa umdla kwaye uhluke kwezinye iiklabhu esinokuzifumana kwakhona e-Ibiza.
Umthombo: Isaphulelo kwiPromo
I-Omnia luluhlu lweeklabhu zasebusuku ezikwizixeko ezithathu ezahlukeneyo kunye neendawo, kubandakanya iSan Diego, iLos Cabos, iBali kunye eyona inomtsalane kuzo zonke iiklabhu, le ikwilas vegas. Iyingxenye yoluhlu olude lweeklabhu ezilungileyo kwihlabathi, kwaye akumangalisi, kuba ine-DJ enkulu efana noMartin Garrix okanye uSteve Aoki. Ikwanazo nezinto ezimangalisayo kunye noyilo olukushiya ungathethi.
Ngokubhekiselele kumfanekiso wayo, sinokuqaqambisa ukuba luphawu oludibanisa zonke izinto ezinobunewunewu nezibalulekileyo esizibaluleyo. I-logo imelwe yi-typography enobuchule kunye neyodwa, iimilo zabo zidityaniswe kunye ukwenza igama lenkampani. Ngokuphathelele umlingiswa ochazwe yi-typography kunye noyilo, sinokuyiqaqambisa ukuba, luchwethezo olunobuzaza kwaye ludemure, ngokusesikweni, inkalo edibanisa kakuhle kakhulu kunye ne-aesthetics yomfanekiso kwaye engahoywayo.
Akuthandabuzeki ilogo eqaqambileyo kwaye iphumelele kakhulu kunye nomxholo womfanekiso wabo kunye nokusingqongileyo abayiyilileyo.
IBootshaus idweliswe njengenye yeeklabhu zasebusuku ezilungileyo kakhulu eYurophu nakwihlabathi. Ibekwe kwisixeko saseCologne (eJamani). Yiklabhu yasebusuku eyilwe yaze yasekwa kudidi lomculo weBass. Ibonakala ngokuba yi-nightclub eyabelana ngeendawo ezinkulu ngaphakathi nangaphandle njengoko ine-terrace enkulu kunye namagumbi amaninzi okwabelana ngendawo.
Ikwanazo neentlobo ezahlukeneyo zomculo njengoko kunjalo kwiTechno kunye nendlu. Ukongeza, abaculi abakhulu baye bahamba, njengoArmin Van Buuren, iinkcukacha ezibeka phakathi kwee-nightclub ezilungileyo kakhulu.
Ukuba sijonga umfanekiso wakho, sinokutsho ukuba uphawu lwakho iprojekthi yokuchwetheza enomtsalane, sans serif kunye nobukhulu obubonakala ngaphandle kwabanye. Ukongeza, ikwabelana ngento eyinxalenye yophawu, inokwakheka okumangalisayo kwejometri, luhlobo lwesikwere esabelana ngesithuba nezinye izinto njengakwimeko yemigca emininzi eqhawuka nomfanekiso wokuqala, ukuvelisa a umfanekiso wesibini oko kuthatha indawo ephambili. Ngaphandle kwamathandabuzo, uphawu olubonisa ubuhle kunye nomoya ococekileyo womculo we-elektroniki.
Ukuba izindululo zangaphambili bezibonakala ngathi ziyaphambana kuwe, le iya kubonakala isuka kwenye iplanethi. I-Printworks yiklabhu yasebusuku eseLondon. Yindawo yokuphupha njengoko ibonakaliswa ngendawo yayo enomacala amathathu kwaye iqulethe uhlobo lwepaseji ebonakala ingenasiphelo. Inomthamo wabantu abangama-5000 kwaye ibalasele ngokuqulatha iindidi ezifana ne-techno kunye nomculo we-elektroniki. Eyona nto imangalisayo ngegumbi kukuba ngaphambi kokuba ibe yi-nightclub, yayiyi-factory eyenzelwe ukwenza amaphephandaba kwisixeko.
I-logo yabelana ngobuhle obufanayo esinokububona kwindawo yayo. Ine-typography enefuthe elithile lekamva, kuba ikhululekile ngokupheleleyo kwaye idala umphumo onomdla kakhulu. Ikwanalo nohlobo lwesimboli eyenziwe yimigca emininzi ecudisanayo, ukwenza uhlobo lwenqwelomoya, olunokuthi kule meko luchaze ubume besakhiwo se-disco. Inkalo enomdla kakhulu ukususela ekubeni ubukhulu bemigca kunye nokwakheka kwenza kube ngumqondiso omkhulu weqela lehlabathi, ngaphandle kwamathandabuzo.
IGreen Valley ithathwa njengeyona klabhu ibalaseleyo emhlabeni. Imi kwidolophu yaseCamboriú (eBrazil). Inomthamo omkhulu wabantu abangama-12.000, iinkcukacha ezithi xa uzijonga nje zibonakale zimangalisa, kuba inokulingana nabo bonke abemi bedolophu encinci.
Ineziseko ezingundoqo ezibonakaliswa ngokuba ngaphandle, ayigqunywanga, kodwa yindawo elungiselelwe imeko engaphandle. Yabelana ngeentlobo ezinkulu kodwa ngaphezu kwawo wonke umculo waseBrazil ugqamile, apho amagcisa abalaseleyo aye adlala.
Ngokubhekiselele kwi-logo yayo, imele ukuba iqulethe into emele kakhulu kwilogo, kulo mzekelo ibhabhathane eliluhlaza. Umbala ophindaphindwa kakhulu kwaye uyinxalenye yombala wenkampani, iluhlaza ngokuqinisekileyo. I-typeface equlethwe yile mihla kwaye isexesheni, kuba iluhlobo lwejometri ye-sans serif ngenxa yeemilo zayo, nto leyo enika umlinganiswa onobubele kumfanekiso. Ilogo ebonisa ulonwabo, amandla, iimvakalelo ezintle kunye nomnqweno wokudanisa nokuva umculo, kwelinye lawona mazwe anempembelelo kakhulu kwezomculo ehlabathini. Ilogo eyilelwe ukuphila yonke icarnival.
I-Epic Club yiklabhu yasebusuku emangalisayo, ibekwe kwisixeko sasePrague, ikomkhulu leCzech Republic. Ngaphandle kwamathandabuzo, linqanaba eligcwele umlingo kunye nokukhanya okuninzi kwindawo yalo. Indawo eyenzelwe abo bathanda umculo we-elektroniki, ukukhanya okubukhali, izingqisho ezikhawulezayo kunye nezomeleziweyo zeemvakalelo ezilungileyo kunye namandla. Yintoni ebonakalisa le klabhu kukuba igcwele izikrini ezinkulu apho eyona nto igxininiswe kakhulu iityhubhu ezinomacala amathathu abekwe kwintsika nganye. I-nightclub egcwele amagcisa abaluleke kakhulu afana no-Oliver Heldens.
Ngokuphathelele uphawu lwayo, luphawulwa ngokuba luphawu olulula noluncinci. Yenzelwe ukumila kwetyhubhu, kuba njengoko sele sitshilo, ityhubhu sesinye seziqalelo eziphindaphindwa kakhulu kuyilo lokusingqongileyo. Ukuchwetheza kulula kwaye kuyafundeka, yi-sans serif kwaye ngenxa yemivumbo kunye neefom, ibonisa ukuba yi-typography yangoku, edlala kakuhle kakhulu ngobuhle kunye nomyalezo abafuna ukunxibelelana noluntu lwabo. Imibala abayisebenzisayo ishushu kakhulu, nangona kunjalo kuyinyani ukuba bayayiqinisa ngomxube weethoni ezibandayo, ezihluke kakhulu.
bassiani yiklabhu yasebusuku ekwidolophu yaseTbilisi (Georgia). Enye inkcukacha yokuqaphela indawo yayo kukuba ibekwe phantsi kweDinamo Arena, ibala leqela leqela lesizwe laseGeorgia. Inomthamo opheleleyo wabantu abayi-1.2oo, umthamo opheleleyo opheleleyo wesithuba esingenanto kwaye ekuqaleni kokujonga, yinkangala.
Ligumbi elikhulu eligqunywe ngekhonkrithi, ligumbi elisetelwe umculo we-elektroniki kunye nendawo elungileyo yokwabelana ngamaxesha amnandi kwishishini elingayeki ukumangala.
Ngokuphathelele ilogo yakho ivelele ngokuqulatha imibala emibini eyibonakalisa kakhulu, emhlophe namnyama. I-typography ilungile yejometri kwaye ibekwe kuyilo oluhambelana ngokugqibeleleyo noko kunokubonwa kwiklabhu. Kwakhona into efuziselayo ivelele, njengoko kunjalo kwimeko yobuso be-gladiator, into enika amandla kunye nomlingiswa oyimfuneko ukuba i-Bassiani ibhalwe njengenye yee-nightclub ezilungileyo kakhulu kwihlabathi.
Iilogo zezinye iiklabhu zibonakaliswa ikakhulu kusetyenziso lweefonti kunye nezinto ezithi, njengoko sibonile, ziyizekeliso kwaye zijonge ngqo.
Siyathemba ukuba olu yilo luyibambe ingqalelo yakho kwaye lusebenze njengenkuthazo enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iilogo zeklabhu
Iingcebiso kunye nemizekelo yecwecwe lomculo